Home Wararka Dowladda Federaalka oo lagu wado in ay dib uga laabtaan go’aankii ay...
Dowladda Federaalka oo lagu wado in ay dib uga laabtaan go’aankii ay dalka kaga eryeen wakiilka QM Nicholas Haysom (Xog Muhiim ah)
Sidii aan idiinkugu sheegnay kol hore waxaa weli socda dadaalo la doonayo sidii aay dowladda federaalka ah uga laaban lahayd go’aankii ay dalka kaga eriday ergeyga QM u fadhiya Soomaaliya Nicholas Haysom, go’aankaas oo dhaliyay xiisado badan oo siyaasadeed.
Dowladda Federaalka ah aya ka dhaga adeegtay codsiyo tara badan oo uga yimid qaar ka mid safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka Yurub oo si toos ah ula xiriiray madaxda dowladda.
MOL aya loo xaqiijiyay in dowladda Federaalka ah ay maanta xiriir la sameysay urur goboleedka IGAD in uu ku taageero go’aanka ay gaareen, balse ururka IGAD ayaa ku gacan seyray in uu taageero go’aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya, waxaana aay madaxda IGAD u sheegeen Soomaaliya in dantooda ay ku jirto in ay ka laabtaan go’aanka ay ku degdegeen ee dalka looga ceyriyay wakiilka QM Nichalas Haysom.
Waxaa sidoo kale laga soo xigtay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta beesha caalamka in dowladda Kenya loo xilsaaray in ay dowladda Soomaaliya ka keenaan ka noqoshada go’aanka ay dalka ugu eryeen wakiilka Qaramada Midoobay 1 Janaayo ee sanadka 2019.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Monica Jumma ayaa loo xilsaaray waxaana lagu wadaa in aay saacadaha soo socdo ay u dirto warqad ay kaga codsaneyso MW. Farmaajo in uu dib uga laabto go’aankii uu dalka kaga eryay Nicholas Haysom.
Waxaa lagu wadaa in 24 ilaa 48 soo socota ay dowladda Soomaaliya dib uga laabato go’aanka ay dalka uga eriday Nicholas Haysom.
Dadaaladan oo si xowli ah ku socdo waxaan saacadaha danbe idiin soo gudbin doonaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan goorta rasmiga ah ee la filaayo in ay dowladda dib uga laabato go’aanka ay ka qaateen wakiilka QM ee Soomaaliya.